India: Kansarku dumarka ayuu kaga badan yahay ragga - BBC News Somali
India: Kansarku dumarka ayuu kaga badan yahay ragga
Dalka India wuxuu hal xidhaale ku noqday dhakhtarrada aduunka ee ku takhasusay dawaynta cudurka kansarka.
Waa mid e, ka sokow in sanadkiiba dad tiradoodu tahay 1.5 milyan oo qof uu ku dhaco kansarku, ayaa hadana heerka cudurkaasi wali ka hooseeyaa marka la barbar dhigo Maraykanka oo kale oo dhaqaale ahaan hore maray.
Taas macnaheedu waxa weeyi in 100,000 ee qofba uu ku dhaco 100 qof, halka ay Maraykanka ka tahay 300.
Arintan waxa si fudud loogu macnayn karaa waa in dadka India badankoodu da' yar yihiin iyo in marka dadku gaboobaan fursada ay ku qaadi karaan cudurka kansar ku korodho, maadaama Maraykanka dadkiisu u badanyihiin dad da' doodu wayntahay. Laakiin fursadaha lagaga kici karo ayaa ah wax ka yar saddex meeloodow meel dadka uu ku dhaco shan sanadood iyo dheeraad ka dib marka uu qof ka ku dhaco.
Arinta hal xidhaalaha ahi se waxa weeyi, sababta uu kansarku ugu badan yahay dumarka India. Sidaana waxa lagu ogaaday daraasad ay samaysay hay'adda Lancet Oncology. Taas oo sheegtay in dadka uu kansarku ku dhaco dunida oo dhan ay 25% raggu ka badan yihiin dumarka, laakiin India ay arintu sidaa ka duwantahay oo ay dumar u badanyihiin dadka uu ku dhaco cudurku.
Kansar laga hor tagi karo
Laakiin sidaas oo ay tahay ayaa hadana kansarka ku dhaca xubinta taranka ee dumarku yahay ka ugu badan ee ku dhaca haweenka India, waxaanu yahay ka afraad ee sababa dhimashada dumarka kansarku ku dhaco.
Dr Ravi Mehrotra oo ah agaasimaha mac-hadka cilmi baadhista iyo ka hortagga kansarka ee India, isla markaana ka mid ah khubarada daraasadda samaysay, ayaa yidhi " noocani waa kansarka ugu fudud ee laga hor tagi karo, mana haboona in ay dumarku u dhintaan kansarka ku dhaca xubinta taranka".
Image caption Kansarka ugu badan ee dumarka India u dhintaan waa ka ku dhaca xubinta taranka.
Tusaale ahaan, daraasadda ay samaysay Lancet waxa ay sheegtaysaa in daraasado taas la mid ah oo laga samayeeyo dumarka kansarku ku dhaco ee gobolka Punjab iyo kuwa gobolkaa u dhashay ee ku nool Ingiriisku ay "noqon karto fursad gaar ah oo lagu ogaan karo hidde sidayaashooda iyo saamaynta deegaanka ay ku dhasheen ku leeyihiin in kansarku ku dhaco dumarkaas, oo la barbar dhigo wax yaabaha kale ee keena kansarka".
Dadaal ayaa socda ayuu yidhi Dr Mehrotra "laakiin waxa loo baahanyahay in xil gaara la iska saaro sidii loo furi lahaa hal xidhaalahan na horyaal".